I-Masters Trophy kunye namanye ama-Awards ku-Augusta kaZwelonke
Ngaba uMninimzi weMasters ufumana i-Trophy?
UMark O'Meara ubonisa iMasters Trophy, eyayifumana ngo-1998. UDavid Cannon / Getty Images
Ewe! Wonke umntu uyazi ukuba umphumeleli weMasters Tournament ufumana iGreen Jacket eyaziwayo. Ayazi kakuhle ukuba kukho i-trophy ye-Masters, kwaye nayo, inikwe umqhubi.
Umnqoli akayena kuphela u-golfer ku-Masters ofumana i-trophy, nangona kunjalo; kukho ii-trophies ezininzi, amayeza kunye namanye amajelo anikwa ngonyaka. Siza ngaphaya kwala manqaku kunye namaphepha alandelayo alandelayo.
I-Masters trophy - umzobo we- Augusta National Golf Club clubhouse - nguyena ubona kumfanekiso ongentla. Amagama omqhubi kunye nomgijimi kwiMasters ngamnye abhalwe kwi-trophy ngonyaka. Yenziwe ngamaqhekeza angaphezu kwama-900 esilivere, ngokweMasters.com, kwaye ihlala ehamba ngeenyawo ezijikelezileyo apho iinqununu zesilivere eziphethe amagama egolisa.
I-trophy yaqaliswa ngo-1961 kwaye ihlala kwindawo yokuhlala kwi-Augusta National clubhouse. Ukususela ngo-1993 isicatshulwa esiliva esisekuqaleni sinikezelwa kwiqhawe leMasters.
Ngoko nantsi yintoni iqela ngalinye leMasters elifumanayo ekuphumeleleni kwakhe:
I-replica ye-Masters trophy
I-2.3-ounce, iindondo zegolide ze-3.4-intshi ezibandakanya amagama athi "I-Augusta National Golf Club" kunye nokunikezelwa kweBlueers Circle
I-Troy Low Amateur
USergio Garcia ubonisa iSiza yeSiliva njenge-Amateur Low kwi-Masters ka-1999. Craig Jones / Getty Izithombe
I-amateur ephantsi kwi-Masters iphinda ithole i-trophy, kodwa kuphela xa i-amateur ephantsi yenza iinqununu. (Ukuba akukho mculi owenza isinqununu, akukho mculi ofumana i trophy.)
I-trophy enikezelwa kumfundi ophantsi yinto eboniswa ngasentla nguSergio Garcia osemncinci, uSergio ocacileyo wayengakhange aphuhlise indlela yakhe yesimo. I-trophy cup is cup cup yesiliva kwaye, akumangalisi, ibizwa ngokuba yi-Silver Cup ngo-Augusta National poobahs.
I-Silver Cup iye yanikezelwa kwi-amateur ephantsi eyenziwe ukususela ngo-1952.
I-3 ye-Contest Trophy kunye namanye ama-Masters Awards
UJerry Pate ugoba isitya se-crystal ayenayo ngokuphumelela uMqhubi we-Masters Par-3 ngo-2005. UHarry How / Getty Izithombe
Umncintiswano wePar-3 udlalwa ngoLwesithathu weveki yeMasters, ngelinye ilanga ngaphambi kokuba umdlalo ogqithiseleyo uphumelele. Kwaye umnqobi we-Par-3 Contest ufumana i-trophy.
Le trophy iyisitya se-crystal, kwaye iboniswe ngasentla nguJerry Pate emva kokuphumelela umhla wokuziliba o-9 ngo-2005.
Amanqaku angaphezulu eMasters
I-Augusta yeSizwe yeGaloli yeGrafti inene impela ityhifi kunye namagosa ambalwa kwi-Masters minyaka yonke. Ukongeza kwizinto ezigqityiweyo kumaphepha angaphaya nangaphezulu, ezi zilandelayo zibhaso zilandelayo:
Umqhubi-mqhubi ufumana idilesi yesilivere, efana nomdaka wegolide ophumeleleyo ngaphandle kokuba, kakuhle, isilivere.
Umqhubi-mqhubi uphinde ufumane i-salver yesilivere (i-salver iyindawo yokukhonza).
I-second amateur amateur, ukuba wenza isinqununu, ufumana iindondo zesilivere.
Ngosuku ngalunye lomncintiswano, i-golfer eyithumela ijikelezi ephantsi ifumana i-crystal vase kunye ne-logo ye-Masters etyunjwe kuyo.
Nabani owenza umgodi-ngomnye ufumana isitya esikhulu sekristal kunye ne logo yeMasters.
Isitya esikhulu se-crystal siya kwiphina i-golfer eyenza ukhozi-kabini.
Zonke i-golfer ezenza ukhozi ngexesha lomncintiswano zifumana iibhola ezimbini ze-crystal kunye ne-logo ye-Masters.
Yiya kwikhowudi ye- Masters FAQ okanye i -Masters Tournament index
I-Pink Lady (okanye i-Pink Lady Tournament)
13 Amanqaku okholo: Ubume obunzima bokuthi ziphi na iiMormon?